» सरकारी अधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा जान नपाउने !
सरकारी अधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा जान नपाउने !
२०७९ बैशाख ३०, शुक्रबार १४:४२
एजेन्सी । बंगलादेश सरकारले यहाँका सबै सरकारी अधिकारीहरुका विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ । कोभिडपछि यहाँको अर्थतन्त्र निकै कठिन अवस्थामा पुगेको भन्दै यहाँको विकास बजेट या अन्य कुनै बजेटबाट विदेश भ्रमण गर्न रोक लगाइएको छ ।